Puntland iyo Galmudug oo maxabiis isku dhaasfaday Gaalkacyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. Puntland iyo Galmudug oo maxabiis isku dhaasfaday Gaalkacyo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame on 16th December 2014
Mareeg.com: Maamul goboleedyada Soomaaliyeed ee Puntland iyo galmudug ayaa maanta magaalada Gaalkacyo isku dhaafsaday maxabiis labada dhinac lagu kala hayey.
Arrintaas waxaa ku guuleystay labo guddi oo iskala shaqaynayey is dhaafsiga maxaabiista, oo qaarkood ku xirnaayeen Garowe, halka qaar kalana afduub loogu heystay deegaan ka tirsan Galmudug.
Maamulka Puntland ayaa sii daayey nin lagu magacaabo C/risaaq Xuseen Tahliil oo ku xirnaa Xabsiga Garoowe, kaasoo sanadkii 2013ka Puntland ku heshay inuu ka mid yahay Al-shabaab. Ninkaas waxaa markii la qabanayey la socday nin lagu magacaabo Maxamuud Nuux Aadan oo lala maxkamadeeyey.
Ehelada ninkaan lagu magacaabo C/risaaq ayaa gobolka Mudug ka qafaashay labo muwaadin oo reer Puntland ah, iyagoo dalbaday in la sii daayo C/risaaq, si ay usii daayaan labada qof ee ay afduubteen.
Guddiyadan ayaa xaalada ku soo dhameeyey in la is dhaafsado saddexdan qof iyagoo u arkay masalaxada nabada in ay ku jirto Sida uu sheegay Suldaan C/naasir Jaamac Seed oo ka mid ahaa gudiga ka soo jeeday Galmudug, Wuxu u mahadceliyey dhinaca kale ee ay kawada shaqeeyeen sii deynta Maxbuuska iyo labada Muwaadin.
Suldaanku wuxuu sheegay in ay Puntland u jeediyeen kal hore in lagu wareejiyo C/risaaq Xuseen ka dibna ay la yimaadaan cadaymo ku cadaynaya dambiga ay u haystaan balse aysan suurta gelin, Wuxuu xusay in iyaguna dhankooda ay ku dadaaleen sidii aan dhibaato loo gaarsiin muwaadiniinta Puntland dhowr jeerna isku dayeen in la sii daayo balse aysan suurta gelin.
Labada maamul ayaa dhawaan ku heshiiyey iney iska kaashadaan amaanka iyo la dagaalanka Alshabaab, oo labada dhinacba dagaal kula jira, hase ahaatee wada shaqeynta ayaa hoos u dhacay kadib markii labada dhinac isku khilaafeen garoon maamulka Galmudug dhistay.